Posted by အမေ့သား at Sunday, February 24, 2013 No comments: Links to this post
မိဘနဲ့ တဂိုဏ်းထဲထားပြီ အာစရိယအနွယ်ဝင်ဖြစ်တဲ့ ဆရာ.........
ကျွန်တော် သူငယ်တန်း လောက်ကတဲ့ကဆရာစီမှာ စာသင်ခဲ့ရသည။် တခါတရံ အတန်းပိုင်ဖြစ်ပြီး
အမြဲတမ်းအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ ကျုရှင်ဆရာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ စာအသင်အပြအလွန်ကောင်းပါသည်။
ဆရာသည် ယမကာမှီဝဲခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ စာမေးပွဲအောင်တိုင်း၊ ကျွန်တော်ဆုရတိုင်း ဆရာ့အတွက်ဂုဏ်ပြုပွဲကအဖေနဲ့့အတူ့အိမ်မှာ ယမကာဝိုင်းဖွဲ့ ကာဧည့်ခံခြင်းပင်ဖြစ်သည်။နောက်နေ့ တိုင်အောင်
ဆရာသည် အရှိန်ကောင်းနေတတ်ပြီး မနက်ကျောင်းလာလျှင် တိုက်ပုံကြီးပခုံးပေါ်တင်လို့ ကောင်းနေတတ်သည်ကို မှတ်မိနေပါသေးသည်။
ဒါဟာ အမှတ်ရနေသေးတဲ့ ကျွန်တော့်ဆရာနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ငယ်ဘဝပါ
အဓိကပြောပြချင်တာက ဆရာ့မိသားစု အကြောင်းလေးပါ…..
အဖေရဲ့ အလုပ်ရုံလေး အောင်ဇေယျ (၅)လမ်းထဲ ပြောင်းလာသည့်အချိန်မှစပြီး ဆရာ့မိသားစုအကြောင်း ကျွန်တော်သိခွင့်ရခဲ့သည်။ ကျွန်တော်လည်း (၁၀)တန်းအောင်ပြီးတော့ တက္ကသိုလ်မတက်ခင်အချိန်လေးမို့အဖေ့အလုပ်ရုံမှာဝင်ရောက်ကူညီပေးနေချိန်၊ အဖေ့အလုပ်ရုံသည် ဆရာ့အိမ်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင်ဖြစ်သည်။
ဆရာသည် စာတော်သော မှတ်ညဏ်ကောင်းသောကျွန်တော့်ကိုတော့ ချစ်ခင်သည်။
အလုပ်ရုံစပြောင်းပြီး အလုပ်စလုပ်တဲ့ ပထမနေ့ မှာ ပထမဦးစွာကြားလိုက်ရတဲ့အသံများကြောင့် ကိုယ်ရောက်နေတဲ့ နေရာကိုတောင် ပြန်ကြည့်မိသည်။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ တိရစ္ဆာန်ရုံများ ရောက်နေသလားပေါ့၊
ဆရာကတော်၏ ကျယ်လောင်သောအသံက နားထဲ စူးရှစွာဝင်လာသည်။
ဘိုကြောင်၊ ဘိုကျား၊ မိကြွက၊် မိယုန၊် ပူးမ၊ ဝက်မ၊ ငနွား အိပ်ရာကမထသေးဖူးလား…….
သေနာလေးတွေ…. သေနာမလေးတွေ…….. ငါ့မှာတော့ စောစောထ ဈေးသွားဖို့ ပြင်ရဆင်ရ
ကျောင်းသွားကြဖို့ ထကြတော့၊ ဟိုသေနာကြီးကလည်း ညကအမူးသောက်လာပြီး ခုထိမထဘူး… တစ်အိမ်လုံး အပျင်းတက်နေတာပဲ… ဆရာကတော်ရဲ့ ပီယဝါစာချစ်ဖွယ်သော ဆွဲလဲသံလေးက မနက်ခင်းရဲ့ ဖွင့်နေကြ
နေ့ စဉ်တေးသံသာလေးတဲ့ ။
သိပ်မကြာလိုက် ထပ်ကြားရပြန်ပြီ။ ဘိုကြောင်…… မိကြွက်ကို ကျောင်းသွားပို့ ၊ ပူးမ………… လာစမ်း လမ်းထိပ်ဈေးသွားဝယ်၊ ဟိုကောင်ဘိုကျား……….. နင့်အဖေအတွက် အသုတ်သွားဝယ်ပေး
မိယုန်…….ထမင်းအိုးသွားကြည့် ဟေ့ဝက်မ….. ဟိုကောင်ငနွား…….စက်သေနတ်နဲ့ ပစ်သလားအောင်းမေ့ရတယ်
တရစပ်မရပ်မနားပြောသွားနိုင်တဲ့ ဆရာကတော်ကိုတော့ ချီးကျုးမိသည်။ကြာလာတော့လည်း နားရည်လေးဝလာသည်။
တော်သေးတယ်.. ဆရာကတော် ထပ်မမွေးတော့တာပဲကံကောင်းသည်။တော်ကြာ. မျောက်တွေ ခြင်္သေတွေ၊ဆိတ်တွေ၊ဆင်တွေပါ ပါလာနိုင်သည်။
ဒါသည် မနက်ပိုင်းတေးသံသာပင်ဖြစ်သည်။အသီးသီးကျောင်းသွားတော့လည်း နားအေးပါးအေးဖြစ်လို့ 
တရစပ် ချက်ပြုတ် လျှော်ဖွတ်နေတဲ့ ဆရာကတော်သည် စက်ရုပ်တရုပ်အလားထင်ရသည၊် အကွက်စေ့နေတာပဲ။ ညနေပိုင်းလေးပြန်ရောက်လာရင်တော့ ပြန်လည်ကြားရပြန်သည။်
အမေ ဗိုက်ဆာတယ် ဘာချက်လဲ……
အမေ အကျီ ပြဲသွားပြီ……..
အမေ စာအုပ်ဖိုးတဲ့……. အမေ……. အမေနဲ့စီစီညံညံတစ်ယောက်တစ်ပေါက်ပြောအပြီး
ဆရာကတော်ရဲ့ လျင်မြန်လှတဲ့ လက်က ဂေါက်ကနဲ၊ ဂွပ်ကန၊ဲ ဘုန်းကနဲ၊ဒေါင်ကနဲ… ပတ်ဝိုင်းတီးသလို အားပေးလိုက်သည်။
ဟိုကောင်ဘိုကြောင်… ဗိုက်ဆာရင်သွားစားပေါ့ မီးဖိုထဲမှာ……………….. ဂေါက်
ဘိုကျား အကျီပြဲအောင် ဘယ်လောက်တောင် ကမြင်းကျောထသလဲ….. ဂွပ်
မိကြွက် ဝယ်ပေးထားတာမှမကြာသေး…….………………………………. ဘုန်း
မိယုန်ရယ် နင့်အဖေက လစာမပေးသေးဖူး နင်တို့ ကတမျိုး ကဲဟာ……. ဒေါင်
ဂေါက၊် ဂွပ၊် ဘုန်း၊ ဒေါင် အပြီး အသီးသီးထပြေးကြလေတော့သည်။
ညပိုင်းအစီအစဉ်ကတော့ ကောင်းပြီးပြန်လာတဲ့ ဆရာနဲ့ ဆရာကတော်ရဲ့ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်ပေါ့။ မူးလာတဲ့ ဆရာက… ချစ်စဖွယ် ဆရာကတော်ကို ….ဟေ့ကောင်မ ….. ထမင်းစားမယ်. ဘာချက်လဲ…….
ကန်စွန်းရွက်ကြော်၊ ငပိတို့ စရာ….. ဟာကွာ.. တခါလာလည်း ဒါ တခါလာလည်း ဒီဟင်း တခြားဟင်း
မင်းမချက်တတ်ဖူးလားလို့ မူမူးနဲ့ ပြောလို့ မပြီးခင် သေနတ်ထဲ ကျည်ထိုးသံသဲ့ သဲ့ လေးကြားလိုက်ရပြီး တရစပ်ပစ်သံကညအချိန်မှာအစပ်မပျက်တိုးထွက်လာလေသည်။
သေနာရဲ့ နင်ပေးတဲ့ လစာ တပဲခြောက်ပြားနဲ့နင်က ဘာစားချင်သေးလို့ လဲ…
နင်ပေးတဲ့ ဒုက္ခ(၇) ကောင်ရဲ့ ကျောင်းစရိတ်ကလည်းရှိသေး…..
တနေ့ တနေ့ဘယ်လို့ စီမံနေရလဲ မမေးပဲ… … ရှင်မူးလာရင် အေးအေးနေစမ်းပါတော်၊
အဲ့ ဒါကြောင့် အိမ်မပြန်ချင်တာ ပြောလိုက်ရင် ဒါပဲ…. ကျက်သရေကိုမရှိဖူး…..
တောက်.... ပြန်လာလို့ မင်းမျက်နှာ မြင်ရရင် စိတ်ကုန်တယ်၊ ဪ. ရှင်က ခုတော့ စိတ်ကုန်တယ်ပေါ့
အရင်ကတော့ မင်းမှမင်းပါပဲဆို….. တော်သေးတာပေါ့ စိတ်ကုန်လို့ စိတ်မကုန်ရင် ထပ်ထွက်လာမဲ့ဟာတွေအတွက် ရင်လေးစရာ…. ဟင်း…ဟင်း…… ရှင်ကသာ စိတ်ကုန်နေ ကျက်သရေမရှိဖူးလို့ ပြောနေပါ၊
အခုနေများ လမ်းလေးခွဆုံမှာ ပက်လက်အိပ်နေ တကောင်မှ ခွကျော်သွားမှာ မဟုတ်ဖူး
အကုန်ဝိုင်းအားပေးလို့ ရှင်ပါ ညစာငတ်သွားမယ်။ ဆရာကတော်ရဲ့ နောက်ဆုံးကျည်ဆန်တတောင့်ကြောင့်
ဆရာ ဘာမှမပြောနိုင်တော့ပဲ လက်နက်ချကာကွပ်ပျစ်ပေါ်မှာ ဖလက်ပြသွားလေသည်။ အိမ်ရှေ့ မှာထိုင်နေကြတဲ့သားသမီးတွေကတော့ အဖေ၊ အမေတိုက်ပွဲကို မထူးဆန်းကြတော့ ညစဉ်ကြားနေကျ စကားလုံးများမို့ရိုးအီနေကြပြီထင်ပါသည်။ ညသည် ပြန်လည်တိတ်ဆိတ်သွားပြန်သည်၊ကျွန်တော်လည်း အလုပ်ရုံလေးပ်ိတ်လို့ 
အိမ်ပြန်လာခဲ့တော့သည်။ ပြန်လာရာလမ်းမှာတွေးမိသည၊် ဪ.......သူ့ အိုးနဲ့ သူ့ ဆန်တော့ တန်နေတာပေါ့လေ.....
တနေ့ကျွန်တော်အလုပ်ရုံရှေ့က ထိုင်ခုံမှာထိုင်နေတုန်း ဆရာ့သားအကြီးဆုံးကောင် ကြောင်…... ဟုတ်တယ် ဘိုကြောင်… လက်ထဲစာရွက်လေးကိုင်လို့ ထွက်လာတော့ ဟေ့ကောင် ဘိုကြောင်… ဘယ်သွားဖို့လဲကွ
အမေ မိတ္တူကူးခိုင်းလို့ သွားကူးမလို့ဦးမျိုးတဲ့… ..ဘာသွားကူးမှာလဲကွ…. သန်းခေါင်စာရင်းပါ ဦးမျိုး
ပြစမ်းပါအုံးကွ… ဦးမျိုး ကြည့်ချင်လို့ ဆိုပြီး ကျွန်တော်ယူကြည့်လိုက်တော့….. ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပစ်မလဲအောင်မနည်းထိန်းလိုက်ရသည်၊ ဟိုက်ရှားဘား ဟုနုတ်ကထွက်ကျလာသည်။
မင်းတို့ ဟာရော… ဟုတ်ရဲ့လားကွဟုစောဒကတက်မိသည်။ ဟုတ်ပါတယ်ဗျ… မတွေ့ ဖူးလား… အဖေနဲ့ အမေနာမည်
သူပြောမှ ပြန်ကြည့်မိသည်၊ ဟုတ်ပါသည်… အဖေ ၊အမေနာမည်က ကျွန်တော့်ဆရာနဲ့ ဆရာကတော်နာမည်
မမှားပါ….. မှားနေတာက……….မဟုတ်ဖူး၊ မှားတယ်လို့ လည်းပြောမရ တခါမှမကြားဖူးသောနာမည်များ
ဘယ်သူမှမခေါ်သောနာမည်လေးများ၊ သန်းခေါင်စာရင်းတွင် လှပစွာ အစီအရီ၊ အထက်အောက် တညီတညာလေးတွေမို့ဆွံအစွာ ကြည့်ပြီးတော့ ပြန်ပေးလိုက်မိသည်။တဆက်တည်း ပါးစပ်က ရွတ်ကြည့်နေမိတော့သည်။
ပြည့်စုံအေးရွှေ ………..ဟာလှလိုက်တဲ့ နာမည်လေးတွေ လမင်းမို့ မို့ တို့လွန်းထားထားတို့ 
ထိုင်ငိုသွားရမဲ့ နာမည်လေးများကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူတို့လေးတွေကို အများသိတာကတော့
ငနွား ……….ဆိုတဲ့ နာမည်လေးများလွှမ်းမိုးနေခဲ့တာကို ကျေနပ်နေတဲ့ သူတို့လေးတွေ….
ငယ်သေးလို့ ပဲ ဘာမှမပြောသေးတာလို့ ထင်မိသည်။ ခုတော့ဘယ်လိုနာမည်လေးတွေနဲ့ များ ရှေ့ ဆက်သွားနေကြသလဲဆိုတာ သိချင်လှသည်။ နောင်တချိန်ပြန်ရောက်ခဲ့ ရင်တော့ သွားလည်ရင် နာမည်လေးများမေးကြည့်ပြီး ကျွန်တော်သိခဲ့သော ကြောင်၊ ကျား၊ ကြွက်၊ ယုန်၊ ပူး၊ ဝက်၊ နွားကလေးတွေကို သူတို့ ရဲ့ နာမည်အရင်းလေးများနဲ့သာတွဲပြီး တွေ့ချင်မိတာ၊ ကျွန်တော်ဆန္ဒအမှန်ပါ
အမှားများပါရင် ခွင့်လွတ်ပါလို့ ဆရာကိုဦးချတောင်းပန်ရင်း..တချိန်က ကျွန်တော့်ဆရာရဲ့မိသားစုလေးအကြောင်းကို
Posted by အမေ့သား at Saturday, February 16, 2013 No comments: Links to this post
Posted by အမေ့သား at Thursday, February 14, 2013 No comments: Links to this post